सरकारले सच्यायो स्वास्थ्यकर्मीको ग्रेड, कसको मासिक तलब कति ? – Health Post Nepal
सरकारले सच्यायो स्वास्थ्यकर्मीको ग्रेड, कसको मासिक तलब कति ?
२०७८ साउन ३० गते ११:५५
सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)देखि नै लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको निजामती कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक कर्मचारीलगायतको तलब वृद्धि गरेको हो।
त्यसैगरी, सहायक दोस्रो सुरूको तलब २२ हजार ६८० रूपैयाँ र ७ ग्रेडसहित जम्मा तलब २७ हजार ९७२ रुपैयाँ हुने भएको छ।
त्यसैगरी, अधिकृत छैठौं तहको डाक्टरको सुरुको तलबमान ३७ हजार ८ सय ७० छ । उसले अधिकतम ५ ग्रेड मात्र खान पाउँछ । उसको प्रतिग्रेड रकम अर्थात एक दिनको तलब १२६७ छ।
स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत सहायक प्रथमस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृत १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी) सम्मका चिकित्सक तथा कर्मचारीको सुरु तलब स्केल, अधिकतम ग्रेडसंख्या, प्रतिग्रेड रकम अन्तिम तलबमान यसप्रकार कायम गरिएको छ :
2 thoughts on “सरकारले सच्यायो स्वास्थ्यकर्मीको ग्रेड, कसको मासिक तलब कति ?”
केशब दाहाल says:
येस्तो बिना आधारको समचार नल्र्ख्नुहोला ।
रमबाबु दास says:
सहायक प्रथम भन्दा सहायक दोस्रोको तलव कम भयो यो बुझीएन